पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? - Mero Tv Online
admin - २०७८, २९ श्रावण शुक्रबार ०३:०० 0
Home रोचक जानकारी पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी...
ल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ?काठमाडौं – पिल्स (खाने चक्की) महिलाले प्रयोग गर्ने ग,र्भनिरो,धको अस्थायी साधन हो । यो गर्भ,निरोध गर्न चाहने महिलाहरुको लागि ज्यादै प्र,भावकारी अस्था,यी साधन हो ।
यौ,न सम्प,र्क गर्नु परेमा कण्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ । पिल्स खान छुटेको अवधिमा यौन सम्पर्क भएको भएमा, आकस्मिक गर्भ नि,रोधको साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । महिला स्वास्थ्यबाट। apnepal.com बाट
भिडियो admin - २०७८, २९ श्रावण शुक्रबार ०३:०० 0
समाचार admin - २०७८, २९ श्रावण शुक्रबार ०३:०० 0